China ụlọ ọrụ PP Weet Mat na ndị na-emepụta | ShiningPlast
Kpụrụ Eke Mat
ShiningPlast Woven ahihia ahịhịa na-arụ ọrụ site na ịkwụsị inye ndị ata ahụ ìhè anyanwụ, wee si otú ahụ gbuo ha. N’otu oge ahụ na-enye akwa mmiri zuru oke maka ala n’okpuru ya.
Ejiri looms okirikiri pụrụ iche mee. ShiningPlast kpara PP Weed Mat bụ nke na-adịgide adịgide ma nweekwa ike ịgha iwe. Gụnyere UV kwụsiri ike. ShiningPlast igbo nwere ike ịnagide ihu igwe siri ike ma guzo ogologo oge iji chekwaa ubi gị na nhazi ala.
Mkpogharị PP na ntighari ugboro na-eme ShiningPlast Woven Weed Mat ọzọ Enyi-enyi na enyi.
·Ike na urabledachi ：
·Dị Mkpa ：
·Resistant na-eguzogide mmiri
SBPP gbara ama: SBPP lamination chọrọ maka ihe antiskid dị n’elu.
Nke gara aga: Friji Greenhouse Fabric
Osote: Blanket mkpuchi ihe